Shirkadaha Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka leh ee FFP1
Faa'iidadeena ： 1. Welcom OEM & ODM. 2. Qiimaha Warshadaha, kala duwanaanshaha qiimaha dhexe. 3. Tayada si wanaagsan ayaa loo xakameyn karaa. 4. Alaab fara badan, qaabka, nooca, nashqadaha iwm 5. Wax alla wixii aad rabto, waxaan kuu raadin karnaa si sahlan wakhti kasta. 6. Yaqaanaan suuqa iyo badeecad kasta oo aan bixinno. 7. Koox xirfad iyo khibrad leh. 8. "Jawaab Degdeg ah" & adeeg fiican ka dib iibinta. Codsiga ： 1. Codsi: adeegsiga dhismaha, macdanta, dhar-ka-gooshka, dawaynta shiidi. 2. Codatio ...
Codsiga ： 1. Codsi: adeegsiga dhismaha, macdanta, dhar-ka-gooshka, dawaynta shiidi. 2. Codsiyada: nolol maalmeedka, warshadaha warshad, SPA-yada, isbitaalada, rugaha caafimaad, iskuulka, meelaha shaqada, iwm. 3. Kahortagga raad raacyada gaaska dabiiciga ah iyo urka 4. Ilaalinta waxyaabaha ka kooban walxaha la shiidayo, nadiifinta, goynta iyo bacda, ama Hawsha ka shaqeynta macdanta, dhuxusha, macdanta birta, bur, bir, alwaax, manka iyo walxaha kale qaarkood. Waxyaabaha dareeraha ah ama aan saliida lahayn ee ay ka soo baxaan murrashadu ...